SalesRep.ai: Kushandisa Njere Kugadzirisa Multi-Channel Prospect Kukurukurirana | Martech Zone
Sezvo vhidhiyo iyi kubva Mutengesi inoratidza, chikamu chikuru chenguva yekutengesa inobuda inopedzwa kubatanidza kana kuronga kubatana nemutengi. SalesRep inoshandisa kufona otomatiki ine yakazvimiririra, yechisikirwo mitauro yekugadzirisa chikuva kuti utore iko kuedza kubva kumashure kwetimu rako rekutengesa, zvichivagonesa kuisa pfungwa dzavo dzese pakutengesa - kwete kubatana.
Ipuratifomu inobvumira vatengi kuvaka matanho akarongwa vachishandisa email, izwi, uye mameseji eSMS.
Pusheni yakapusa yebhatani muCRM yako inotanga nzira yekutevera kune yega inotungamira yako yekutengesa munhu yaanofanira kubatana nayo. SalesRep inotevera neinotungamira kwemwedzi isinganete. Kana chibvumirano chisina kuitwa panguva yekubatana, wedzera chinongedzo mumutsara wekutevera nzira uye chikuva chinoita zvimwe.
Makiyi Akakosha eSalesRep Sanganisira:
Tevera kuteedzana - Chiito kuyerera kwekufona, zvinyorwa uye maemail system ichaita kuti iende mushure meimwe yega lead lead SalesRep. Kana usati wambotaura nemutungamiri, matanho akakodzera ekuteedzana anotorwa. Kana iwe uchitevera kubva kune yapfuura yekutengesa kufona imwe yakatangwa. Wedzera chero yekutevera nzira inodiwa kuSalesRep.ai.
Kufona ne zvomunharaunda kuvapo - SalesRep.ai ichafona inotungamira panzvimbo yako kazhinji uye sekureba sezvaunoda. SalesRep.ai ichafona kubva kunhamba dzenharaunda uye haizonetsere vako reps kusvikira vawana kutungamira pamutsetse. Kana vachinge vaita - SalesRep.ai ichavaudza kuti iko kufona kwacho ndekwei vozobatana kune wako anomiririra kana wedhipatimendi rekutora. Kana iyo inotungamira isipo, SalesRep.ai ichasiya voicemail kana kusungirira kuti udzokere zvakare pane imwe nguva inotevera.
AI SMS uye maemail meseji - SMS inotumirwa kubva kunhamba dzemuno uye maemail anotumirwa kubva kune ako reps akaundi account sekunge vari kuvatumira. Ine chinhu cheAI, apo SaleRep.ai inogamuchira meseji kubva kumutungamiriri, inogona kunzwisisa zvinoreva uye kuita pairi. AI inogona zvine mutsindo Mira kana Kunonoka kuteedzana; Rongedza kana Rongedzazve runhare; uye pindura mibvunzo yakapusa saka haufanire.
Heano mufananidzo wekuti vangasimudzira sei injini dzekuteedzera.
Iyo sisitimu yakazara, iine kugona kukwira mukati mevatengi vese, kwese kutengesa, uye nemhinduro dzese.
Ivo vanotopa Chrome kuwedzera:
Kubatanidzwa kunosanganisira Salesforce, Velocify, Microsoft Dynamics, Hubspot, uye Infusionsoft. Uchishandisa SalesRep.ai, makambani anokwanisa kudzivirira kurasikirwa nevatengi, anogona kusunungura kutengesa rep nguva yekutengesa, uye pakupedzisira kuvhara vamwe vatengi.
Tags: aimamiriro ekugadzwacrm njerehubspotInfusionsoftMicrosoft Dynamicskutengesa kusetwa mamirirokutengesa kushandisa michinakutengesa kufonakuteedzana kwekutengesasalesforcemutengesimutengesi.aivelocity
Iwe Unogona Sei Kukwereta Uye Kushandisa An Mifananidzo Pamhepo?